搜索 Antara 的结果：
antara：a. n. prep. [Sk. antar，BSk. antara] 内的，中間的； 機會，中間，障礙. abl. antarā 在途中，在中間. antaraṃ karoti 保持距離，分離疏遠； 移（消，刪）除，使毀滅. -aṭṭhaka 月的第八日的前後. -āpaṇa 賣店，中（間的）店. -kappa 中劫. -ghara 家中. -cara 闖入者. -bāhira 内外. -vāsaka 安陀衣，内衣. antarantare，antarantarena （就）在兩者中間. antarantarā 偶而； 屢次，常常，再三. antarena 在中間.
antara：a. n. prep. [Sk. antar，BSk. antara] 内の，中間の； 機会，中間，障碍. abl. antarā 途中で，中間で. antaraṃ karoti 距離をおく，離れる； 除く，滅ぼす. -aṭṭhaka 月の第八日の前後. -āpaṇa 売店，中店. -kappa 中劫. -ghara 家の中. -cara 闖入者. -bāhira 内外. -vāsaka 安陀衣，内衣. antarantare，antarantarena 両者の中間にて. antarantarā 時に，しばしば. antarena 中間に.
antara：a. n. prep. [Sk. antar，BSk. antara] 内の，中間の； 機会，中間，障碍. abl. antarā 途中で，中間で. antaraṁ karoti 距離をおく，離れる； 除く，滅ぼす. -aṭṭhaka 月の第八日の前後. -āpaṇa 売店，中店.-āpatti中间罪. -kappa 中劫. -ghara 家の中.-cakka中间占[占相]. -cara 闖入者. -bāhira 内外.-bhogika村主. -vāsaka 安陀衣，内衣.-sammasa内触. antarantare，antarantarena 両者の中間にて. antarantarā 時に，しばしば. antarena 中間に
Antara，【中】 不同。 【形】 内部的，在中间的。 antare，在中间。~kappa，【 阳 】 中 劫 。 ~ghara，【 中 】 内 村 ，内房。 ~sāṭaka，【中】 内衣。（p23）
[antara+ṇa. （2） antare（anitea） bhavaṃ antaraṃ. ，ṭī.292. （āntara-saṃ）]
[အန္တရ+ဏ။ （၂） အန္တရေ（အလယ်၌） ဘဝံ အန္တရံ။ ဓာန်၊ဋီ။၂၉၂။ （အာန္တရ-သံ）]
[ati+ara，ati bandhane aro. ，ṭī.771. anta+rā+a，antaṃ rāti dadāti. thoma. ṭṭhaçṭī-nitea antara（1）ç antara（2）ç antarāç antarikāç antarena- tayuea atthuddhāra pra kra. dī，ṭṭha，1.35. aṃ，ṭṭha，2.297. udāna，ṭṭha.146. iti，ṭṭha.261. cariyā，ṭṭha.16. sārattha，1.62. aṃ，ṭī，2.292-ca . ，sya，，8va2-.]
[အတိ+အရ၊ အတိ ဗန္ဓနေ အရော။ ဓာန်၊ဋီ။၇၇၁။ အန္တ+ရာ+အ၊ အန္တံ ရာတိ ဒဒါတိ။ ထောမ။ ဋ္ဌ，ဋီ-တို့၌ အန္တရ（၁），အန္တရ（၂），အန္တရာ，အန္တရိကာ，အန္တရေန-တို့ကို တစ်မျိုး တစားတည်းထား၍ အတ္ထုဒ္ဓါရ ပြလျက် ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ဒီ၊ဋ္ဌ၊၁။၃၅။ အံ၊ဋ္ဌ၊၂။၂၉၇။ ဥဒါန၊ဋ္ဌ။၁၄၆။ ဣတိဝုတ်၊ဋ္ဌ။၂၆၁။ စရိယာ၊ဋ္ဌ။၁၆။ သာရတ္ထ၊၁။၆၂။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၉၂-စသည်နှင့် ဓာန်။ ဓာန်၊သျ၊သစ်၊၈ဝ၂-တို့ကြည့်။]
antara：[nt.] difference. adj. inner； inter.
ANTARA：[ad] ở khoảng giữa，đồng thời，cùng lúc --magge đang đi lối nửa đường
ANTARA：[nt] khác nhau [a] bên trong anṭare ở khoảng giữa --kappa [m] khoảng giữa một kiếp （trái đất） -ghara [nt] khoảng giữa xóm，làng
antara：khoảng cách，khoảng không，không gian
（၁） အလယ်၊ အကြား၊ ကြား။ （က） ကြား-နေရာ-အရပ်-ဌာန။ （ခ） ကြားကာလ။ （ဂ） ကြားခဏ။ （၂） အပေါက်။ （က） အပေါက်၊ အကြား၊ အခေါင်း။ （ခ） အပေါက်အလမ်း၊ အခွင့်။ （ဂ） အပေါက်အစ၊ အနာအဆာ၊ အပြစ်။ အန္တရဂဝေသီ-လည်းကြည့်။ （၃） အကြောင်းအရာ။ （၄） စိတ်။ အတ္ထန္တရ，အနနုဂတန္တရ，အာမိသန္တရ，ကောပန္တရ，ဒေါသန္တရ，နိရန္တရ-တို့လည်းကြည့်။ （၅） အတွင်း။ အန္တရ，အန္တရာ，အန္တရေ-တို့ကြည့်။ （၆） အထူး၊ ကွဲပြားခြင်း၊ အသီးအခြား။ （၇） အနီး။ （၈） အခြား၊ တစ်ပါး။ （၉） အကြားအလပ်။ （၁ဝ） ခြားဆီးခြင်း၊ ကွယ်ခြင်း။ အနန္တရ-（၂）-ကြည့်။ （၁၁） ကင်းခြင်း။
（၁） အတွင်း၌-စိတ်၌-ဖြစ်သော။ （၂） အကြား-ခြားကွယ်ခြင်း-ရှိသော။ （န） （၃） အဝတ်ပုဆိုး။ （က） ခါးဝတ်သင်းပိုင်။ （ခ） အပေါ်ဝတ်၊ ကိုယ်ရုံ၊ ခြုံထည်။ အန္တရသာရက-နှင့် အန္တရာ（၂） အနက်လည်းကြည့်။
အတွင်း။ အန္တရဃရ-စသည်ကြည့်။ ဤအန္တရသည် အန္တောနိပါတ်နှင့် အနက်တူဖြစ်သည်။
ခြားနားမှု။ အကျိုးအကြောင်း။ အကြောင်းထူး။ အကြား။ အခွင့်။ ပျက်စီးခြင်း။ သင်းပိုင်။ ခါးဝတ်ပုဆိုး။
တံ အန္တရံ ကထေသိ၊ ထိုအကြောင်းကို ကြားလျှောက်၏။ အန္တရေ၊ အကြား၌။ အန္တရေန၊ အကြားဖြင့်။ ကင်း၍။ ကြဉ်၍။ အန္တရတော၊ စိတ်၌။
ခြားသော။ အကြားဖြစ်သော။ စပ်ကြားဖြစ်သော။
တေန သဒ္ဒေန ဓမ္မကထာ အန္တရာ အဟောသိ၊ ထိုအသံဖြင့် တရားစကားသည် ကြားပြတ်သည် ဖြစ်၏။
antarā：adv. [antara 的 abl.] 在～之間，在其間，在那當中； 有時，偶而. -kathā 中間的話，暫時的談話（閒聊，在談話中間）. -kāja 二人棒，天秤棒（二人挑的扁擔）. -parinibbāyin 中般涅槃. -bhava 中有. -magge 在中途. -maraṇa 中間死，中間夭折. antarā ca ～ antarā ca 在～和～的中間.
antarā：adv. [antara の abl.] その間に，時々に. -kathā 中間の話，暫時の談話. -kāja二人棒，天秤棒. -parinibbāyin 中般涅槃. -bhava 中有. -magge 中途にて. -maraṇa 中間死，中夭. antarā ca…antarā ca …と…との間で.
Antarā，【副】 之间，其间。 ~magge，在途中，在道路上。（p23）
[anta+i+a. ra-lā. rū.nhā-1va9. nīti，sutta.nhā-38va. .115va-. antarāti vemajjhe.rū.ṭī.nhā-61. antarā-saddoyaṃ majjhavacano. ，pañcikā.2，7. īsaddāeieaarvāca aho saddā chaṭṭhīanitea dutiyāvi ra. rū.286. .2.7. nīti，sutta.588- dī，ṭṭha，1.35. ma，ṭṭha，2.93. aṃ，ṭṭha，2.298. udāna，ṭṭha.97-.]
[အန္တ+ဣ+အ။ ရ-လာ။ ရူ။နှာ-၁ဝ၉။ နီတိ၊သုတ္တ။နှာ-၃၈ဝ။ ဓာန်။၁၁၅ဝ-တို့ကြည့်။ အန္တရာတိ ဝေမဇ္ဈေ။ရူ။ဋီ။နှာ-၆၁။ အန္တရာ-သဒ္ဒေါယံ မဇ္ဈဝစနော။ မောဂ်၊ပဉ္စိကာ။၂၊၇။ ဤသဒ္ဒါ၏ အယှဉ် မြို့ရွာစသည့် အရပ်ဟော သဒ္ဒါတို့နောင် ဆဋ္ဌီအနက်၌ ဒုတိယာဝိဘတ် သက်ရသည်။ ရူ။၂၈၆။ မောဂ်။၂။၇။ နီတိ၊သုတ္တ။၅၈၈-တို့နှင့် ဒီ၊ဋ္ဌ၊၁။၃၅။ မ၊ဋ္ဌ၊၂။၉၃။ အံ၊ဋ္ဌ၊၂။၂၉၈။ ဥဒါန၊ဋ္ဌ။၉၇-တို့ကြည့်။]
antarā，（adv.），in between； meanwhile.
Antarā，（adv.） [Abl. or adv. formation fr. antara； Vedic antarā.] prep. （c. Gen. Acc. or Loc.），pref. （°-） and adv. “in between” （of space & time），midway，inside； during，meanwhile，between. On interpretation of term see DA.I，34 sq. -- （1）. （prep.） c. Acc. （of the two points compared as termini； cp. B.Sk. antarā ca Divy 94 etc.） D.I，1 （antarā ca Rājagahaṁ antarā ca Nāḷandaṁ between R. and N.）. -- c. Gen. & Loc. Vin.II，161 （satthīnaṁ between the thighs，where id. p. at J.I，218 has antara-satthīsu）； A.II，245 （satthīnaṁ. but v. l. satthimhi）. -- （2） （adv.） meanwhile Sn.291，694； It.85； Dh.237. -- occasionally Miln.251. -- （3）. （pref.） see cpds.
--kathā “in between talk，talk for pastime，chance conversation，D.II，1，8，9； S.I，79； IV，281； A.III，167； Sn.p. 115； DA.I，49 and freq. passim. --gacchati to come in between，to prevent J.VI，295. --parinibbāyin an Anāgāmin who passes away in the middle of his term of life in some particular heaven D.III，237； A.I，233； Pug.16. --magge （Loc.） on the road，on the way J.I，253； Miln.16； DhA.II，21； III，337； PvA.151，258，269，273 （cp. antara°）. --maraṇa premature death DhA.I，409； PvA.136. --muttaka one who is released in the meantime Vin.II，167. （Page 48）
antarā：Between，on the way
（၁） အလယ်၌၊ အကြား၌၊ အတွင်း၌။ （၂） အပေါ်ဝတ်၊ ကိုယ်ရုံ၊ ခြုံထည်။ အန္တရသာဋက-ကြည့်။
အကြား၌။ ခရီးအကြား၌။ ပိုင်းခြားအပ်သော ကာလအကြား၌။
အန္တရာ စ ရာဇဂဟံ အန္တရာ စ နာဠန္ဒံ၊ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်နှင့် နာဠန္ဒမြို့၏အကြား၌။
与 Antara 相似的巴利词：